Ka hortagga - Wisepowder
Wisepowder waxay leedahay noocyo kala duwan oo ceyriin ah oo gabow ah & antiaging, waxayna leedahay nidaam maamul oo tayo leh.
Muujinaya 1-8 ee natiijooyinka 19
Budada Alpha-lipoic Acid (1077-28-7)
L - (+) - Ergothioneine (EGT) budada (497-30-3)
Gabowga & Dareenka (Anti-gabowga)
Gabowgu waa wax aan dhammaanteen qabanno laakiin aad u yar wax ka fahamno. Maskaxdaada waxaa ku dhaca isbadalo marka aad gabowdo taasi oo saameyn yar ku yeelan karta xusuustaada ama xirfadahaaga fikirka Way fududahay in la sameeyo liistada dhamaan isbeddelada ku yimaada da'da - xusuusta oo kaa lunta, duuduubnaanta, murqaha oo lumiya
Daawaynta (kahortaga gabowga) waxay noqon kartaa mowduuc adag oo wax laga qabanayo: dagaal ayaa waqtigan lagula dagaallamaa macnaha erayga cilmi baarista iyo daawada, iyo astaanta alaabada badeecadaha firfircoon oo badiyaa khiyaamada.
Daawada ka hortagga (Anti-gabowga) hadda waxay leedahay macnayaal iyo macno kala duwan oo aad u kaladuwan.
-In cilmi baarista bulshada ee cilmiga kahortagga (gabowga) cilmi baarista loola jeedo si gaar ah gaabinta, ka hortagga, ama dib ugu laabashada geedi socodka gabowga. In kasta oo mustaqbalku u muuqdo mid rajo weyn leh, haddana ma jiro tiknolojiyad caafimaad oo la xaqiijiyey oo la heli karo oo hadda gaabisa ama dib u dhigaysa da'da dadka.
Bulshada caafimaadka iyo sumcad ku leh, daawada gabowga waxaa loola jeedaa ogaanshaha hore, kahortaga, iyo daaweynta cudurada da'da la xiriira. Tani way ka duwan tahay wax ka qabashada geedi socodka gabowga laftiisa, iyo xeelado badan iyo daaweyn ayaa hadda la heli karaa. Tusaale ahaan daaweynta Alzheimers, cudur la xiriira gabowga.
Bulsho weynta ganacsiga - oo ay ku jiraan khiyaanooyin badan ama khiyaanooyin aan badnayn - kahortagga gabowga waa astaan ​​qiimo leh iyo qaab la soo bandhigo oo lagu kordhiyo iibka.
Astaamahan, alaabada ka hortagga gabowga ayaa sii kordheysa oo caan noqotay. Codsiga budada kahortagga waxaa ka mid ah:
-Ku soo saar alaabada daryeelka
-Cuntooyinka nafaqada leh
Daaweynta Gabowga & Alzheimers
Cudurka 'Dementia' wuxuu ku sii badiyaa da'da, qiyaastii 3% dadka da'doodu u dhaxayso 65 iyo 74, 19% inta u dhexeysa 75 iyo 84, iyo ku dhowaad kala bar dadka da'doodu ka weyn tahay 85 sano ayaa waallida qaba. Qaybaha kaladuwan waxay u dhexeeyaan cillad garasho xumo illaa neurodegenerative cudurada cudurka Alzheimers, cudurka cerebrovascular, cudurka Parkinson iyo cudurka Lou Gehrig.
Gabowgu waa qodobka ugu weyn ee halista u ah cudurka Alzheimers. Alzheimers waa nooc waallida oo sababa dhibaatooyin xagga xusuusta, fikirka iyo dhaqanka ah. Calaamadaha cudurka Alzheimers sida caadiga ah waxay u kobcaan si tartiib tartiib ah waxayna uga sii daraan waqti ka dib, iyagoo noqda kuwo aad u daran oo farageliya howlaha maalinlaha ah. "Waan ognahay in da'da ay tahay waxa kaliya ee ugu weyn ee keena cudurka Alzheimers, sidaa darteed layaab malahan inaan helno bartilmaameed daroogo ah oo sidoo kale lala xiriirinayo gabowga,"
FDA waxay sidoo kale oggolaatay sida Namzaric, isku darka Namenda (memantine) iyo Aricept, daaweynta daweynta cudurka Alzheimer ee dhexdhexaad ilaa daran.
Namendais (memantine) ayaa la rumeysan yahay inay ku shaqeyso iyada oo la xakameynayo glutamate, kiimikada maskaxda ee muhiimka ah. Marka lagu soo saaro xaddi xad-dhaaf ah, glutamate waxay u horseedi kartaa dhimashada unugyada maskaxda. Sababtoo ah NMDA antagonists waxay ka shaqeeyaan si ka duwan sida cholinesterase inhibitors, labada nooc ee daroogada ayaa loo qori karaa isku darka.
Badeecooyin badan oo cusub ayaa la ogyahay inay faa'iido u leeyihiin daaweynta cudurka Alzheimers. Sida budada J-147, budada CMS121.
Budada J-147 (1146963-51-0): J147 waa wax ka mid ah elixir casri ah nolosha, waxaa la muujiyey in lagu daaweeyo cudurka Alzheimers iyo dib u celinta gabowga jiirka waxayna u dhowdahay tijaabooyinka bukaan socodka ee bini'aadamka Kooxda ayaa horeyba u sameysay daraasado dheeri ah oo ku saabsan molikuyuullada ay wax ka beddeleen saameynta J147 ee mitokondrial ATP synthase-oo iyagu laftoodu noqon kara bartilmaameedyo daroogo cusub. J147 wuxuu dhammeystiray baaritaanka sunta sunta ee loo yaqaan 'FDA' ee looga baahan yahay xoolaha.
Budada Alpha-lipoic acid (1077-28-7): Alfa-lipoic acid waa kiimiko la mid ah fiitamiin loo yaqaan antioxidant, taas oo macnaheedu yahay in laga yaabo inay maskaxda ka ilaaliso xaaladaha dhaawaca ama dhaawaca.
Alfa-lipoic acid waxay u muuqataa inay caawineyso ka hortagga noocyada qaarkood ee dhaawaca unugyada ee jirka, waxayna sidoo kale soo celineysaa heerarka fiitamiinnada sida fitamiin E iyo fitamiin C. Waxaa sidoo kale jira caddeyn ah in alpha-lipoic acid ay hagaajin karto shaqada iyo waditaanka neerfayaasha ee cudurka macaanka.
Xasuusta ayaa ah walaac guud oo ka dhex dhaca dadka waa weyn. Waxaa la rumeysan yahay in dhaawaca ka yimaadda walwalka 'oxidative door' uu door muhiim ah ka leeyahay luminta xusuusta.
Sababtoo ah alpha-lipoic acid waa antioxidant awood leh, daraasaduhu waxay baareen awooddeeda inay hoos u dhigto horumarka cudurada lagu garto xusuusta luminta, sida cudurka Alzheimers.
Khamiirka, beerka, kelyaha, isbinaajka, baradhada, iyo baradhada ayaa ah ilo wanaagsan oo alfa-lipoic acid ah.
Budada CMS121 (1353224-53-9): Geroprotectors waa walxo awood u leh inay hoos u dhigaan heerka uu xayawaanku ku sii gaboobayo isagoo bartilmaameedsanaya hababka gabowga. Daraasadda cusubi waxay baareysaa tiro isku dhafan ah waxayna tilmaamaysaa qaar ka ilaalinaya neerfayaasha waxyeellada iyagoo hoos u dhigaya geedi socodka gabowga; cilmi baarayaashu waxay ugu magacdareen xeryahooda geroneuroprotectors.
Iyaga oo u isticmaalaya xeryahooda saldhig ahaan, cilmi baadhayaashu waxay abuureen seddex murashax oo Alzheimer ah oo loo yaqaan CMS121, CAD31, iyo J147; Waxay sidoo kale si toos ah u isticmaali jireen aaladda kalluunka iyo curcumin. Kooxda ayaa muujisay in dhammaan shanta xeryadood ay yareeyeen biomarkers ee gabowga, ay kordhiyeen cimriga dhexe ee jiirarka iyo duqsiga, ayna yareeyeen calaamadaha waallida.
Da'da waa saameynta waqtiga ee jirka aadanaha, waxayna ku dhacdaa heerar kala duwan:
-Qaar-gacmeed. Da'da unugyada oo ku saleysan tirada inta jeer ee ay soo kaceen. Unugku wuxuu badin karaa ilaa 50 jeer ka hor inta aaladda hidde ahaan aysan awoodin in si sax ah loo koobiyeyn karo, taas oo ay ugu wacan tahay telomeres-ka gaagaaban. Dhibaatooyinka badan ee lagu sameeyo unugyada by xagjiriinta xorta ah iyo qodobo kale, ayaa unugyada badan waxay u baahan yihiin inay soo baxaan.
-Dhinaca jirka. Hormoonnada waxay door weyn ka ciyaaraan da'da, gaar ahaan inta lagu jiro korriinka carruurnimada iyo qaan-gaarka qaangaarnimada. Heerarka hoormoonka ayaa isbeddelaya nolosha. Baaluqnimada waxay keentaa finanka iyo nabarrada waaweyn. Markii aan sii gaboobno, isbeddelada hoormoonnada waxay horseedaan maqaar qallalan iyo menopause.
-Waxay waxyeelo soo gaadhay. Khasaarooyinka la isku uruuriyay dhammaanti waa dibedda. La kulanka sunta, qorraxda, cunnooyinka waxyeelada leh, wasakhda, iyo qiiqa ayaa ku dhaca jirka qofka. Waqti dheeri, arrimahan dibedda ah waxay u horseedi karaan dhaawac unug jirka wuxuu ku dhacaa gadaal awoodeedii uu ku lahaan lahaa kuna dayactiri lahaa unugyada, unugyada, iyo xubnaha.
-Daawo gabowga. Markaad maalintaada sii soconeyso, unugyadaada ayaa si joogto ah cuntada ugu beddela tamarta, taas oo soo saarta wax soo saar waxyeello leh. Geedi socodka metabolizing iyo abuurida tamar waxay keenaysaa waxyeelo jirka mudo waqti ah. Qaar waxay aamminsan yihiin in gaabinta nidaamka dheef-shiid kiimikaadka iyadoo la adeegsanayo howlo sida xannibaadda kaloriinku ay yareyn karto da'da dadka.
Calaamadaha guud ee dabeecadda cudurka Alzheimer waxaa ka mid ah hurdo la’aanta, warwareega, jahwareer, walaac, gardarro, deganaansho la'aan, iyo niyad jab. Saynisyahanada ayaa baranaya sababta calaamadahaasi u dhacayaan waxayna darsayaan daweynta cusub — daroogada iyo dawooyinka — si loo maareeyo.